‘यार’लाई पद्यश्री साहित्य पुरस्कार | suryakhabar.com
Home अन्य साहित्य ‘यार’लाई पद्यश्री साहित्य पुरस्कार
on: ७ कार्तिक २०७५, बुधबार १८:४९ In: साहित्यTags: No Comments
काठमाडौँ । नेपाली साहित्यको विकास तथा विस्तारमा उल्लेखनीय योगदान पु¥याएबापत डा. तारानाथ शर्मा (तारानाथ भण्डारी) लाई ‘पद्यश्री साधना सम्मान’ र आख्यानकार नयनराज पाण्डेको सस्मरण सङ्ग्रह ‘यार’लाई ‘पद्यश्री साहित्य पुरस्कार’ प्रदान गरिएको छ ।
प्रतिष्ठानद्वारा आज यहाँ आयोजित कार्यक्रममा प्रतिष्ठानका अध्यक्ष जीवा लामिछाने र उनका माता हरिकला लामिछानेले संयुक्त रुपमा उक्त पुरस्कार एवम् सम्मान प्रदान गरको हुन् । आख्यान लेखनको विशिष्ट शिल्प रहेको ‘यार’ भित्र लेखकका निजी संस्मरणलाई जीवन्त रुपमा बुनिएका छन् । लामा र छोटा गरी २५ वटा संस्मरणलाई सरल भाषामा गहन एवम् लोभलाग्दो अभिव्यक्ति संस्मरणमा छ ।
दार्जिलिङबाट प्रकाशित हुने साथी साप्ताहिक पत्रिकामा इलाम शीर्षकको निबन्ध २००८ सालमा छपाएर नेपाली निबन्ध साहित्यमा उदाएका डा. शर्माका सम्पादन तथा लेखनमा हालसम्म ३३० कृति छन् । सो अवसरमा प्रतिष्ठानका अध्यक्ष लामिछाने, उपाध्यक्ष धनराज गिरी र अमर न्यौपानेले प्रतिष्ठानका गतिविधिमाथि प्रकाश पारे ।
सम्मानित व्यक्तित्व डा शर्माले उमेरले आफू ८० काटे पनि साहित्य रचनामा कमी नआएको बताए । अर्का पुरस्कृत स्रष्टा पाण्डेले पुरस्कार पाउनु लेखकको जीवनमा सुन्दर घटना होइन, असल कृतिको सिर्जना गर्न सक्नु नै सर्वाधिक सुन्दर घटना हो भने।
नेकपाकै साँसद बिडारीको दाबी, ‘दशैँको टिका लगाउदा राष्ट्रपतिबाट गम्भीर गल्ती भयो’
७ कार्तिक २०७५, बुधबार १८:४९